चीन-भारतबीचको लद्दाख घ’ट’नाबारे ट्रम्पले बल्ल मुख खोले, कसको पक्षमा छन उनि ? गरे यस्तो ट्वीट — Sanchar Kendra
२सुत्केरीको उपचारमा लापरवाही भएपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामाको घोषणा
३निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णयले प्रचण्ड समुहलाई फाइदै फाइदा, अब के गर्लान ओली ?
४ओलीले घोषणा गरेको मध्यावधिक चुनाव सर्नेबारे गृहमन्त्री थापाले गरे यस्ताे खुलासा
५पशुपतिमा जलाइँदै गरिएको श’व प्रहरीले किन लियो नियन्त्रणमा, यस्तो छ कारण
६माधव नेपालले दिए ओली समूहलाई ‘धुलोछाप’ पार्टीको संज्ञा
७सर्वसाधारणलाई निषेध गरेर प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पुल उदघाटन
८चीन र भारतका सैनिकबीच सीमामा फेरि भि’डन्त, २४ सैनिक घाइते, अवस्था तनावपूर्ण
९प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पशुपतिमा पूजा
१०प्रचण्ड-माधव समूहद्वारा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा, यस्ता छन कार्यक्रम
११६ महिने विकास खर्च निराशाजनक
१२आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
चीन-भारतबीचको लद्दाख घ’ट’नाबारे ट्रम्पले बल्ल मुख खोले, कसको पक्षमा छन उनि ? गरे यस्तो ट्वीट
काठमाडौँ । चीन र भारतबीचको लद्दाखमा भइरहेको तनाब र २० भारतीय सैनिक मारिएको घटनाबारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि मुख खोलेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारत र चीनबीच जारी तनावमाथि निगरानी राख्दै मद्दतको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अमेरिकाले भारत र चीनबीच कुराकानी गरिरहेको ट्रम्पले बताएका छन् ।
१५–१६ जूनको राती गलवान घाटीमा भारत र चीनबीच भएको हिंस्रक संघर्षमा भारतका कमान्डिङ अधिकारीसमेत २० सैनिक मारिएका थिए । चीनका पनि थुप्रै सैनिक हताहत भएको खबर छ तर चीनले आधिकारिक आँकडा जारी गरेको छैन । भारत र चीनबीच वर्तमान तनावलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिले गत महिना सोसल मिडियामा उनी भारत र चीनबीच मध्यस्थता गर्न तयार भएको बताएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सर्वदलीय बैठकमा मुख्य आठ विषयहरु उठाएका छन् । चीनले भारतीय भूमिमा घुसेर आक्रमण गरेपछि राष्ट्रिय धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले विभिन्न आठ बुँदा उठाएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले उठाएका आठ बुँदा
पोस्ट नियन्त्रणमा कुनै घुसपैठ भएको छैन । सीमा रक्षाका क्रममा सर्वोच्च बलिदानी दिएका २० जना वीर सैनिकले शत्रुलाई ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो र सदाका लागि पाठ सिकायो । वीर सैनिकहरुको बलिदानलाई बिर्सिने छैन । हाम्रो सेनाहरू सम्पूर्ण तवरमा तयारी अवस्थामा छन् र आवश्यक प्रतिरोध गर्न सक्षम छन् ।
सीमाको रक्षा गर्न सीमा रेखामा तैनाथ सेनालाई आवश्यक कारबाही सञ्‍चालनका लागि उचित कदम लिन पूर्णअधिकार दिइएको छ । हामी शान्ति चाहन्छौं र कूटनीतिक प्रयास । यी दुवै एकैसाथ यस मुद्दालाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न चाहान्छौं । हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामी विगत ५ वर्षमा सीमा पूर्वाधारको स्तरोन्‍नति र सुधार गर्ने प्रयासमा समर्पण गरेका छौं ।
सुदृढ पूर्वाधारको कारणले गर्दा हाम्रो सेनाले गस्तीलाई उच्चतम बनाउनुका साथै र चिनियाँ गतिविधिको जाँच गरिरहेको छ । भारतले कुनै पनि मुद्दामा बाह्य दबाबको सामना गर्न कहिले हार मानेको छैन र यस मुद्दामा पनि भारत हरेक परिस्थितिको सामना गर्न तयार छ । माथि उल्लेखित बुँदाहरुमध्ये अधिकांश टिप्पणीकारहरुले पहिलो बुँदालाई समातेर विभिन्‍न टिप्पणहरु गरिरहेका छन् । यद्पि यस बुँदालाई कुनै रुपमा अपब्याख्या नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सर्वदलीय बैठकमा उठाएका बुँदालाई जिम्मेवार, वस्तुगत र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका दृष्टिकोणले निकै सकारात्मक छन् र यसल राष्ट्रिय स्वार्थलाई झन बलियो बनाउनुका साथै विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमतालाई थप बढावा दिनेछ । यस महामारीकारीका आर्थिक अनिश्‍चिता उत्पन्‍न हुनसक्‍ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेकाबेला भएको राष्ट्रिय सहमतिले भारतको प्रगतिमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले एकातिर कोरोना महामारी र अर्कोतिर सीमा समस्याका कारण राष्ट्रहित विपरीतका अभिव्यक्तिले मुलुकलाई फाइदा नगर्ने उल्लेख गर्दै सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको उदार र उदाहरणीय नेतृत्व क्षमताको कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले निर्वाचित भएको छ । यसमा छिमेकी मुलुक नेपाल, पाकिस्तान र चीनले पनि भारतको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
भारतमा १९ वर्षीया यी छात्रालाई बनाइयो उत्तराखण्डको एकदिने मुख्यमन्त्री, यस्ताे कसरी भयाे सम्भव ?